Manni fayyaa Sioux land guyyaa Jimaata sababa covid-19 namni dabalatan du’uu himan | KWIT
Akka oduu conference guyya kannati, manni fayyaa Sioux land namni qoranno godhee virus qabachuf laluuf magaala Woodbury county keessati baay’e gad bu’aa jirraachu himan. Garuu eegumsi manneen biisnassii irrati seeri jalaa demaan hin ka’a jechuu miti.
Har’a TestIowa kan magaala sioux city keessati argamuuf guyya dhumati, garuu qoranno yoo fetaan karaa community health center ituuma fufaa.
Bakka bu’aan kuta Chris Hall Test Iowa kan magaala Sioux City keessati argamu cufamuu isaaratti yaada kenne.
Seera baasan magaala Sioux City aka jedhe bakka bu’aan kutaa maalif bakka qoranno akka cufe beeku hin dandeene. Chris akka jedhee Governor Kim Reynolds ummata tuffachudhan akkasuma kominitiiy keessatti dhukuba umaata kana bay’ee midhaa jiruu lash bayee godhan. Akkasumas bu’aa TestIowa kunni ummataafi manna fayyaa ttif kennaa jiruu yaalin isaan godhan hin dabalamne jedhen. Qorannoo godhameefi baasiin bahe iftoomina qabaame galu qaba jedhan.
Manni fayyaa Sioux land akka jedhetti qorannoo magaala Woodbury county keessa jiranitti akka bohaaran hime.
akkasumas, MercyOne fi United Point health-St. Luke’s nama 90 kaa COVID-19 qabame akka tajaajila jiran himan. Kunis nama 9 dabalate waan guyyaa kanna duraa irra.
Babal’ina virus hir’isuf wanni godhame baasi ikonomii irratti kan mul’isu hojii dhabduma April keessatti 10.2% guddatee jira. hojattoota misooma Iowa guyyaa Jimaata akka himanitti hojii dhabiinsi March keessa 3.3% ol gudate sanbooda April keessa harka sodihiin dabale.
Wagga darbe hoji dhabduman Iowa kessati 2.7% ture.
Hojii dhabdummaan biyyoota April keessa 14.7% ture.
Akkasumas hojii dhabduman magaala Nebraska keesati April 8.3% ture. Akka biyyaatti harka xiqaan sadafa irra jira.
By Fatiya Adam • May 20, 2020
Iowa governor Kim Reynolds kutaa keessatti seera dabalataa adeemsisa jirtii. Jimaata irraa jalqabee mana fiilmii, muuziyeemii, bakka bineensota fi bakki qophi cidhaa addaaan fageenya eegata banamuu hindandayaama. Bakki pooli amoo barumsa qoofa banamaa.
Guyyaa Kamsa May 28ffa manni dhugaati percentin 50% ni banamaa.
Haa ta’u malee, muuziyeemii kan magaala Sioux city keessati argamu guyyaa Jimaata akkuma cufame oolu himan. Kunis Sioux city Art center walqabateefi, dubbi himaaan akka jedheti bakki kunnis suuta suutan kan banamu ta’a.
Manni fayyaa Siouxland dabalatan guyyaa har’a namni lama sababa Covid-19 magaala Woodbury country
By Fatiya Adam • May 19, 2020
Manni fayyaa Siouxland dabalatan guyyaa har’a namni lama sababa Covid-19 magaala Woodbury country kessatti du’uu gabaase. Namni haarawa qabames nama 50 dha. Lakkofsii guyyaa kibxata nama qabame waliigalatati muldhisu nama 2,300 oli dha.
Magaala Dakota County keessati namni coronavirus harawni du’e 2 yoo ta’u kan haarawa qabame hinjiruu, nami waliigalati du’e magaala kana kessati 16 yoo ta’u kan qabame immoo 1,500 dha. Magaala Woodbury fi Dakota counties keessatti namni du’e 36 gahee jira.
By Fatiya Adam • May 18, 2020
Warri Centers for the Disease Control akka qabaaseti dhukubni syndrome kun hoo’aa fi I’iitahu qaama namatti fida. Akkasumas tolchanii ufi eegu qabdan.